नेपालमा सलमान खानको कार्यक्रम हुन नदिने विप्लब माओवादीको घोषणा…. - Enepali Online
नेपालमा सलमान खानको कार्यक्रम हुन नदिने विप्लब माओवादीको घोषणा….
नेत्रविक्रम चन्द विल्पब नेतृत्वको नेकपा माओवादीले भारतीय नायक सलमान खान नेपाल बिरोधि भएको भन्दै नेपालमा हुन लागेको कार्यक्रम असफल बनाउने घोषणा गरेको छ। विप्लव माओवादीले मदिराको प्रोमोशनका लागि दशौं हजारको टिकट बेचेर नेपालमा सलमानको कार्यक्रम गर्ने कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएको छ।
नेपालका विवादास्पद व्यवसायी राजेन्द्र खेतानको समेत केही लगानी रहेको गोर्खा ब्रुअरीले कर नतिरेको विषयमा उक्त कम्पनी र कर कार्यालयलाई यही फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतले बोलाएको छ । यसअघि पनि उक्त कम्पनीले कर नतिरेपछि गोर्खा ब्रुअरीले खेतान ग्रुपको ३० प्रतिशत सेयर आफूले लिएर व्यवस्थापन समेत आफैले लिएको थियो । त्यसपछि चुडामणि शर्माको कर फर्छौयौट आयोगबाट ८७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि कर छुट लिएको थियो । विप्लव माओवादीले नेपालमा कर तिर्न नसक्नेले भारतीय कलाकारलाई करोडौं रुपैयाँ तिरेर कसरी कार्यक्रम गर्न सक्छ ? भन्दै गोर्खा ब्रुअरीको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।
Previous Post Previous post: आजको राशिफल, वि.सं.२०७४ फाल्गुन १५ गते मङ्गलबार, २०१८ फेब्रुवरी २७ तारिख
Next Post Next post: सलमानसँग १ सय १० जना नेपाल आउने, ५ करोड लैजाने
श्रीमानज्यू डा. केसीसँगै हामी सबैलाई मानहानी मुद्दा लगाउनुहोस् : गगन थापा।।।